China Silicone Coins Isikhwama & Abicah izikhwama ifektri abakhiqizi | SJJ
Izinhlamvu zemali nezinye izesekeli zibalulekile kepha akulula ukuzithola, futhi azihlanzekile ukuzifaka ngqo ezikhwameni zakho, ezinye zizolimala noma ziklwebheke ukuzihlanganisa.
Izinhlamvu zemali nezinye izesekeli zibalulekile kepha akulula ukuzithola, futhi azihlanzekile ukuzifaka ngqo ezikhwameni zakho, ezinye zizolimala noma ziklwebheke ukuzihlanganisa. I-amacala emali abicahngosayizi omncane nokuma okuhlukahlukene okuhle yizona zinto zokuxazulula izinkinga. Zenziwe ngezinto zekhwalithi ephezulu ze-silicone kanye nokudonsa uziphu noma ukuvalwa kwensimbi, kungabamba izinhlamvu zemali nezesekeli ngokuhlukile komunye nomunye. Ukwenza amacala ngosayizi omkhulu njengesikhwama sesandla, yizikhwama ze-silicone ezisetshenziswa kahle empilweni yakho yansuku zonke. Imibala yangemuva nemibala emihle yama-logo ingafana nemibala ye-PMS ngokuya ngemfuneko yekhasimende, futhi ikhangise imibono nemibono yabaxhasi bezimali. Amacala emali abicah nezikhwama ze-silicone aqinile, ahlala ngokwanele ukuthi angasetshenziswa isikhathi eside. Amelana namanzi ngakho-ke angasetshenziswa ezimeni zezulu ezinemvula, ukugwema izimoto zakho, indlu yakho nezinye izindawo ezimanzi. Izikhwama ze-silicone zenzelwe i-Eco-friendly futhi zemvelo ukudlulisa amazinga wokuhlola avela e-USA noma e-Europe, ngakho-ke angasetshenziselwa ukuthwala ukudla kanye nama-condiment.
Designs: 2D, 3D amalogo ngaphandle, bobunjwa kungenziwa egcizelele
Usayizi: Ngaphansi kuka-100 mm, noma ngokwezifiso
Imibala: Ingafanisa imibala ye-PMS, noma ilandele imfuneko sakho.
Okunamathiselwe: Ukuvalwa kwensimbi, amasongo e-Jump, ama-Keyrings, ama-keychain, izingwegwe noma ukulandela
Langaphambilini Abicah Keychains
Olandelayo: Amakhava Esembozo Senkomishi Yesilicone
Isikhwama semali esikhwama semali
Isikhwama Semali Yekhathuni LikaSilicone
amacala emali abicah
Isikhwama Semali Yesilicone
Isikhwama Semali Esilula Esibucayi
Isiphanyeko sesikhwama nesitholiokhiye